အွန်​လိုင်းမှာ နာမည်​ကြီး​နေတဲ့ “အမအပြာကားကြည့်​လား” ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကို သရုပ်​ပြလိုက်​တဲ့ စူးရှထက်​ - Thadin
[ May 20, 2019 ] အိပ်တဲ့အခါ သံပရာသီးစိတ်ကို အိပ်ရာအနီး ထားပေးရုံနဲ့ ရရှိမယ့် ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးများ…! HEALTHY
[ May 20, 2019 ] ငွေတွေ အများကြီးအကုန်ခံပြီး ကျောက်ကပ်ဆေးနေရတဲ့ ဝေဒနာရှင်များတွက် သတင်းကောင်လေးမို့ ရှဲပေးပါ…! HEALTHY
[ May 20, 2019 ] အမျိုးသမီးတွေ အမှန်အတိုင်း ဖွင့်ဟလေ့မရှိတဲ့ အချက် (၄) ချက် NEWS
[ May 20, 2019 ] “လက်တွေ့ ပျောက်ခဲ့တဲ့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း နှင့် ပန်းနာရင်ကျပ်အတွက်ဆေး” HEALTHY
[ May 20, 2019 ] မုတ်သုံလေ မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီဟု ဦးထွန်းလွင်ပြော…! NEWS
HomeCELEBRITYအွန်​လိုင်းမှာ နာမည်​ကြီး​နေတဲ့ “အမအပြာကားကြည့်​လား” ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကို သရုပ်​ပြလိုက်​တဲ့ စူးရှထက်​
အွန်​လိုင်းမှာ နာမည်​ကြီး​နေတဲ့ “အမအပြာကားကြည့်​လား” ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကို သရုပ်​ပြလိုက်​တဲ့ စူးရှထက်​
September 4, 2018 Admin Kwee CELEBRITY 1
စူးရှထက်လို့​ဆိုလိုက်​ရင်​​တော့ ညှို့အားပြင်းတဲ့​ကောက်​​ကြောင်းအလှ​တွေနဲ့ ရိုးရှင်းရဲ့သူမရဲ့မျက်​နှာအပြင်​ ခိုင်​မာတဲ့စိတ်​ဓာတ်​ရှိတဲ့ အမိုက်​စား​မော်​ဒယ်​တစ်​ဦးလို့ ပရိသတ်​​တွေအားလုံးက သိထားကြတာပါ။
သူမက​တော့ အစ္စဏီ လက်​ရှိရင်​ဆိုင်​​နေရတဲ့ မုဒိန်းမှုရဲ့ တရားလိုတစ်​ဦးလည်း ဖြစ်​တာ​ကြောင့်​ ပရိသတ်​​တွေရဲ့ စိတ်​ဝင်​စားမှုကို အပြည့်​အဝရရှိထားတာပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ ​မော်​ဒယ်​စူးရှထက်​က​တော့ ဒီ​နေ့​လေးမှာ အွန်​လိုင်းသုံးစွဲသူ​တွေကြားမှာ ​ရေပန်းစား​နေတဲ့ “အမအပြာကားကြည့်​လား” ဆိုတဲ့ အ​ပျော်​အပျက်​ဗီဒီယို​လေးကို သရုပ်​ပြခဲ့တာပါ။
စူးရှထက်​က​တော့ ရူးခါ​နေ​အောင်​မိုက်​တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်​​ကောက်​​ကြောင်းအလှက်ို ပိုင်​ဆိုင်​ထားတာပါ​နော်​။
အသည်း​တွေယား​အောင်​လုပ်​ပြခဲ့တဲ့ စူးရှထက်​ရဲ့ ဗီဒီယို
စူးရှထက်​က​တော့ နာကျင်​ခဲ့တဲ့အတိတ်​​တွေကို​မေ့ထားပြီး​ လတ်​တ​လောမှာ အနုပညာအလုပ်​​တွေ ပြန်​လည်​လုပ်​ကိုင်​​နေပြီပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။
Source: Zar Chi’s Facebook
စူးရှထကျလို့ဆိုလိုကျရငျတော့ ညှို့အားပွငျးတဲ့ကောကျကွောငျးအလှတှနေဲ့ ရိုးရှငျးရဲ့သူမရဲ့မကျြနှာအပွငျ ခိုငျမာတဲ့စိတျဓာတျရှိတဲ့ အမိုကျစားမျောဒယျတဈဦးလို့ ပရိသတျတှအေားလုံးက သိထားကွတာပါ။ သူမကတော့ အစ်စဏီ လကျရှိရငျဆိုငျနရေတဲ့ မုဒိနျးမှုရဲ့ တရားလိုတဈဦးလညျး ဖွဈတာကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ စိတျဝငျစားမှုကို အပွညျ့အဝရရှိထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ မျောဒယျစူးရှထကျကတော့ ဒီနလေ့ေးမှာ အှနျလိုငျးသုံးစှဲသူတှကွေားမှာ ရပေနျးစားနတေဲ့ “အမအပွာကားကွညျ့လား” ဆိုတဲ့ အပြျောအပကျြဗီဒီယိုလေးကို သရုပျပွခဲ့တာပါ။
စူးရှထကျကတော့ ရူးခါနအေောငျမိုကျတဲ့ ခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးအလှကို ပိုငျဆိုငျထားတာပါနျော။
အသညျးတှယေားအောငျလုပျပွခဲ့တဲ့ စူးရှထကျရဲ့ ဗီဒီယို
စူးရှထကျကတော့ နာကငျြခဲ့တဲ့အတိတျတှကေိုမထေ့ားပွီး လတျတလောမှာ အနုပညာအလုပျတှေ ပွနျလညျလုပျကိုငျနပွေီပဲ ဖွဈပါတယျ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၄)ရက်နေ့ အတွက် မိုးလေးဝသကြေငြာချက်
အမျိုးသားတိုင်း သတိထားသင့်တဲ့ ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်း လက္ခဏာရပ်များ
Doxycycline 100mg Canada cialis Buying Domperidone In Canada Zithromax 500mg Uk
This Month : 39032
This Year : 234430
Total Users : 593454
Total views : 2724116